Guddoonka Golaha Shacabka oo warbaahinta madaxa-bannaan uga digay iney u gafaan Madaxda Dalka – Kalfadhi
Qoraalka oo uu ku saxiixnaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa lugu sheegay in qaar kamid ah warbaahinta madaxa bannaan ay tabiyeen warar been abuur ah oo liddi ku hay’addo iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka.
Qoraalka ayaa lagu yiri. “dhammaan hay’adaha uu sida toos ka ah ugu socdo qoraalkan waxaa si xushmad leh looga codsanayaa in ay talaabo ka qaadaan warbaahinta faafisay wararka been abuurka ah ee meel ka dhaca ku ah dowladnimada Soomaaliya”.
“Golaha Shacabku wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu hayaa mas’uuliyad laf dhabar u ah jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, Goluha Shacabka wuxuu ilaaliyaa islamarkaasna uu dhiiri galiyaa in dalkeenu uu yeesho saxaafad xor ah oo ku dhaqanta Dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.” Ayaa sidoo kale lugu yiri qoraalka.
Qoraalkan ayaa yimid kaddib markii mid kamid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ay qortay in guddoomiye ku xigeenka labaad Golaha Shacabka ee Baarlamaanka uu qaatay laaluusha si meesha looga saaro doodda xildhibaana qaar ee ku wajahneyd habka maareeynta miisaaniyadda dowladda ee 2018, intii uu socday kulankii caadiga ahaa ee Sabtidii uu guluhu ku yeeshay Muqdisho.
Guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Hirshabelle oo maanta u furmay tababar ku saabsan doorka baarlamanka ee la xisaabtanka hay’adaha amniga